Miglior Tariffa Internet Casa
Scopri l’OFFERTA Tiscali Unlimited Wireless: ✔ Prezzo Bloccato. ✔ Modem GRATIS ✔ In regalo2Mesi di Infinity TV VERIFICA SUBITO LA COPERTURA!
Infinity Live Pro is Your All-in-One Solution to produce Amazing Looking Shows or Programs. No matter if you areaTV Studio, School or an individual who would like to have your own TV Channel - We can help you make it happen. If you have any questions, please do not hesitate to click on GET QOUTE to contact us - we are here to help.
Beachfront studio for rent - Ao yon Beach - PHUKET 80% discount !!! don't miss this deal !!! 790 baht week days/ 990 baht weekends ▪4 studios available, each withaprivate entrance. ▪Fully equipped (Smart TV with Netflix access, Kitchen, latex bed, mini fridge, induction plate, microwave, coffee machine, toaster) ▪Shared infinity pool & BBQ corner ▪In-house motorbike rental/ taxi service ▪Restaurants, Cafes, convenience stores and massage shops all within 200 meters from your studio. ▪Kayak free for you to use Send usamessage through Facebook to get this offer! #Phuket #Beachvilla #affordablebeachfrontluxury
Infinity Display gives you more ultra high definition screen and less border. At the right viewing distance, the TV frame almost disappears, leaving nothing but picture right to the edge.
Tv Infinity – Mais de2Canais Vitalícios Sem MensalidadeseSem Travamento – Mais de2Canais Vitalícios Sem MensalidadeseSem Travamento
Tv Esporte FilmeseSéries – Mais de 2.000 Canais Sem Mensalidade
Tv infinity – Mais de2Mil Canais Vitalícios Sem MensalidadeseSem Travamento – Mais de2Mil Canais Vitalícios Sem MensalidadeseSem Travamento
Mais de2mil canais, VitálicioseSéries – tv
Infinity TV – My WordPress Blog
MAIS DE 2000 CANAIS ABERTOS, sériesefilmes para agradar vocêetodaafamília. Tudo SEM MENSALIDADES , em 12 Xecom frete grátis.
Mais de2Mil Canais FilmeseSéries – Sem MensalidadeeSem Travamento
! ! Assista TvaCabo, Futebol, programas, filmeseseriados apenas instalando um aparelho, que é sucesso nos EUA! É só Mais de 3497 Canais (Incluso Premier, DAZNeCombate), diversos filmes lançamentos no cinemaeséries On Demand, tudo em qualidade Full HDe4Kevocê ainda pode baixar aplicativos de Streaming (Youtube, Netflix) para vocêetoda sua família se divertirem! $ , ( ) Simples de usar, é só plugar na TVeusar. Ele já vai todo configurado pra você! ✅ Nunca mais terá que pagar mensalidade nem renovação. para mais informações ⬇⬇⬇
Mais de2Mil Canais sem Mensalidade – Just another WordPress site
1 –2ส.ค. นี้ พบกับปาร์ตี้สุดฟิน INFINITY 8 ที่ สนง.ขาย 13 คอนโดพร้อมอยู่ จากศุภาลัย บนทำเลดี๊ดี ใจกลางเมือง เดินทางสะดวก ใกล้รถไฟฟ้า . พิเศษ!! จองในงาน ฟรี*ของแถม 8 รายการ++ บัตรกำนัล มูลค่า 20,000 บาท TV ตู้เย็น เครื่องดูดฝุ่น ไมโครเวฟ เครื่องฟอกอากาศ ค่าส่วนกลาง ค่าโอนกรรมสิทธิ์ ค่าจดจำนอง มิเตอร์ไฟ . รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กเลย https://bit.ly/3fPzp4l สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 1720 #โปรเดือน8 #8เดือน8 #คอนโด #คอนโดใกล้รถไฟฟ้า #คอนโดติดถนนใหญ่ #คอนโดพร้อมอยู่ #ศุภาลัย * เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
ศุภาลัย ชื่อนี้มีแต่ให้ กับคอนโดฯ คุณภาพ พร้อมเข้าอยู่ ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง-ชมพู พบโปรสุดฟิน INFINITY 8 จัดหนัก จัดเต็ม พร้อมกับของแถมสุดคุ้มกว่า 8 รายการ บัตรกำนัล มูลค่า 20,000 บาท TV ตู้เย็น เครื่องดูดฝุ่น ไมโครเวฟ เครื่องฟอกอากาศ และอื่นๆอีกมากมาย ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ส.ค. 63 เท่านั้น ณ สำนักงานขายโครงการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ☎️1720 หรือ คลิ๊ก https://bit.ly/3fPzp4l #โปรเดือน8 #8เดือน8 #Supalai #SupalaiCondo #คอนโดใกล้รถไฟฟ้า #คอนโดพร้อมอยู่ #คอนโดแถวนนทบุรี * เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
♦️♦️♦️5Stars ဟိုတယ် Facilities များပါတဲ့ ဂရန်းမြကန်သာကွန်ဒို အွန်လိုင်းအရောင်းပြပွဲ (16 July to 15 Aug) ➡ https://www.imyanmarhouse.com/s/y0y5ebk3 မိသားစုများ #လုံးချင်းအိမ်ကဲ့သို့ ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်း နေထိုင်ပြီး #ကွန်ဒိုfacilityအပြည့်အစုံကို ခံစားချင်တယ်ဆိုရင် #သင့်တင့်သောဈေးနှုန်းဖြင့် #Qualityဦးစားပေးတည်ဆောက်ထားသည့် Grand Myakanthar Condo ကို ရွေးချယ်ဖို့ အခုပဲ Booking ယူလိုက်ပါ။ ☎️ 09891266611/ 09891266622/ 09891266633/ 09891266644 =================== အွန်လိုင်းအထူး အရောင်းကာလအတွင်း ပထမဆုံးဝယ်ယူသူ (၁၀) ဦးအတွက် - 180,000 MMK psf မှ စတင်ဝယ်ယူနိုင်မည်။ - အခန်းပေါ်မူတည်၍ ကားပါကင် နောက်ထပ် (၁)နေရာ လက်ဆောင်ပေးမည်။ - အတိုးမဲ့အရစ်ကျ ငွေပေးချေမှုစနစ် - AYA, Yoma, A Bank တို့နှင့် ၂၅ နှစ်အထိ နှစ်ရှည်အရစ်ကျစနစ် များဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်မည်။ စိတ်ဝင်စားပါက အမည် ၊ ဖုန်းနံပါတ် ဖြင့် စာရင်းပေးသွင်းပါ။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မဝယ်ယူလိုပါက သွင်းထားပြီး စိတ်ဝင်စားကြေး ကို 100% ပြန်လည်ပေးအပ်မည်။ အမည်စာရင်းပေးသွင်းရန် ➡ https://www.imyanmarhouse.com/s/y0y5ebk3 =================== Location - အမှတ် ၂၃ ၊ မြကန်သာလမ်း ၊ လှိုင်မြို့နယ် - (ISM အင်တာနယ်ရှင်နယ်ကျောင်းအနီး) အကောင်းစားလုံးချင်းအိမ်များ ပတ်ဝန်းကျင်တွင်တည်ရှိ၍ အေးချမ်းစွာ Privacy ရှိရှိ နေနိုင်မည်။ - ရန်ကုန်မြို့၏ အဓိက အချက်အချာကျသော ဘုရင့်နောင်လမ်းမ ၊ ဗဟိုလမ်းမ ၊ အင်းစိန်လမ်းမ ၊ ပြည်လမ်း များနှင့်နီးသောကြောင့် အလွယ်တကူသွားလာနိုင်မည်။ - ISM ကျောင်း ၊ သီရိမင်္ဂလာဈေးသစ် ၊ ဘုရင့်နောင်လေ့ကျင့်ရေးဂေါက်(ဖ်)ကွင်း ၊ KBZ ဘဏ် ၊ ပါရမီစိန်ဂေဟာ စသည်တို့အနီးတွင် တည်ရှိသည်။ ပိုင်ဆိုင်မှုခိုင်မာခြင်း - (၁) ဧက ကျယ်ဝန်းသည့် ဂရန်မြေပေါ်တွင် ကွန်ဒိုဥပဒေနှင့်အညီ တည်ဆောက်ထား၍ သားစဉ်မြေးဆက် မြေပိုင်ဆိုင်နိုင်မည်။ - ၁၀၀% ဆောက်လုပ်ပြီးစီးပြီဖြစ်၍ စိတ်ချစွာဝယ်ယူနိုင်မည်။ - BCC ကျပြီး၍ အသင့်နေထိုင်နိုင်မည်။ ပေးရတာထက် ပိုများတဲ့ Facilities များ ပြန်ရခြင်း - Infinity Swimming Pool, Gym, Relax Garden Area, Yoga Room, Sauna, Jacuzzi, Steam Room, Private grand lobby, Public lobby စသည့်5Stars ဟိုတယ်များတွင်သာ ရသည့် Facilities များအသုံးပြုနိုင်မည်။ - Multi Function Hall ပါဝင်သောကြောင့် အလှူမင်္ဂလာပွဲများ ၊ အစည်းအဝေးပွဲများ ၊ အခမ်းအနားပွဲအမျိုးမျိုး ကျင်းပပြုလုပ်နိုင်မည်။ - Car Parking (၄) ထပ် ရှိပြီး ကားအစီးရေ ၃၀၀ ကျော် ရပ်နားနိုင်ခြင်းကြောင့် ကားပါကင် မလုံလောက်သော အခက်အခဲများမှ ကင်းဝေးမည်။ - ဓာတ်လှေကား (၅) စင်း ရှိပြီး Residence တွင် နေထိုင်သူများ အတွက် Luxury Lift (၄) စင်း ၊ Relax floor သို့သွားရန် သီးသန့် (၁) စင်း ပါရှိသည်။ - ၂၄ နာရီ မီး (လုံးဝ) ပျက်တောက်မသွားရန် အသံလုံ မီးစက်များ ထားရှိပေးထားသည်။ - ၂၄ နာရီလုံခြုံရေး ၊ CCTV ၊ Card Access Control System ၊ Audio / Video Intercom အစရှိသည့် Facilities များစွာ ပါဝင်ခြင်းကြောင့် အလွန်ပြီးပြည့်စုံသော ကွန်ဒိုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အခန်းဖွဲ့ကောင်းမွန်ခြင်း - အထပ်ပေါင်း (၁၈) ထပ် ပါသည့် Tower (၂) လုံးတွင် - 1502 sqft မှ 2295 sqft အထိ ကျယ်ဝန်းသော အခန်းများကို မိသားစု အနည်းအများပေါ်မူတည်၍ စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ - အိပ်ခန်း (၃) ခန်း၊ ဧည့်ခန်း ၊ မီးဖိုခန်း ၊ ထမင်းစားခန်း ၊ အိမ်အကူခန်း ၊ စတိုခန်း ၊ အဝတ်လျှာ် အဝတ်လှန်းခန်း များစနစ်တကျ ဖွဲ့စည်းပေးထားသည်။ - အခန်းအတွင်း Decoration အပြည့်အစုံ ပြင်ဆင်ပေးထားခြင်းကြောင့် ပရိဘောဂထည့်ပြီး အသင့်နေထိုင်နိုင်သည်။ - အခန်းတိုင်းတွင် Mitsubishi Air Con ၊ TV satellite ၊ Internet Fiber လိုင်းများ တပ်ဆင်ပေးထားသည်။ ငွေပေးချေမှုပုံစံ ကောင်းမွန်ခြင်း - အတိုးမဲ့အရစ်ကျ ငွေပေးချေနိုင်သည်။ - နှစ်ရှည်ပေးချေလိုလျှင် AYA, Yoma, A Bank စသည့်ဘဏ်များနှင့် (၂၅) နှစ်အထိ ပေးချေနိုင်သည်။ ရန်ကုန်မြို့မှာ ကွန်ဒိုဝယ်ဖို့ စိတ်ဝင်စားရင် အရမ်းသာယာလှပတဲ့ Grand MyaKanThar ကွန်ဒိုကို တခါလောက် လာရောက်လေ့လာဝယ်ယူဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။ (Appointment ကြိုယူဖို့ လိုပါတယ်။) အသေးစိတ်ကြည့်ရန်နှင့် အမည်စာရင်းပေးသွင်းရန်➡ https://www.imyanmarhouse.com/s/y0y5ebk3 ☎️ 09891266611/ 09891266622/ 09891266633/ 09891266644 iMyanmarHouse.com မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်း အိမ်ပိုင်ဆိုင်နိုင်စေရမည်။ #iMyanmarHouse_GrandMyaKanThar #MyanmarRealEstate #MyanmarProperty #MyanmarCondo #YangonApartment #YangonCondo #YangonProperty #Hlaing